ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအားလုံး ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ
THE BRIDGE(HALF UNDER THE WATER)
Just look. This bridge is between Sweden and Denmark ... Picture taken from the side of Sweden.
The bridge (or should it be called tunnel?) goes under water to allow movement of ships.
Posted by MYAT KA LAY at 11:18 PM2comments:
JOKES FOR MR. BEAN
(1) BRAIN TUMOR:
(2) MR. BEAN WHILE IN GRADE SCHOOL:
(3) WHILE IN A DRUG STORE:
(4) AT ATM MACHINE:
(6) CHATTING WITH HIS FRIEND:
(7)DEATH OF HIS MOTHER:
(8) MR. BEAN ATTENDING A MEETING:
(9) Spelling lesson:
Posted by MYAT KA LAY at 8:32 PM 1 comment:
Miss Transvestite Contest 2005(Thailand)
He's the winner of Thailand 's Miss Transvestite Contest 2005 (All are males)
အပေါ်ကပုံလေးတွေကို လာလည်တဲ့သူတွေအားလုံး စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ကြည့်ကြလိမ့်မယ်လို့ စိတ်ကူးမိတာနဲ့ post တစ်ခုအနေနဲ့ တင်ထားပေး လိုက်ပါတယ်နော်။ ဒီပုံလေးတွေကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မေးလ်နဲ့ ပို့ပေးထားတာပါ။ သူငယ်ချင်းအားလုံး ဒီပုံလေးတွေကြည့်ပြီး မုဒိတာပွား နိုင်ကြပါစေ........... (ကောင်လေးများကတော့ ဒီပုံလေး တွေကြည့်ပြီး အားမကျသွားကြနဲ့ဦး နော်..............ဟဲ ဟဲ........)
(U MUST BELIEVE THAT WHEN U SEE THIS PHOTO!)
Posted by MYAT KA LAY at 9:19 PM2comments:
Use to ScribeFire
ဘလော့ဂ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူ စူးစမ်းချင်သူတွေ များလာတာနဲ့အမျှ အခက်အခဲတွေနဲ့လည်း ရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်။ တချို့လည်း စိတ်ကူးတွေက ကောင်းပါရဲ့ ဒါပေမယ့် ကုဒ်တွေ မတတ်တော့ စိတ်ညစ်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို မသိတာကို စမ်းလုပ်ရင်း လုပ်ရင်းကပဲ နောက်ဆုံး တတ်ကျွမ်း သွားကြပါလိမ့်မယ်။ အခု ကျွန်တော် ပြောပြချင်တဲ့ တူးလ်လေး တစ်ခုက ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ ပိုစ့်တွေကို သွားမရေးဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ ဘရောက်ဇာကနေ တိုက်ရိုက်ပို့တဲ့ တူးလ်လေးပါ။ အရင်တုန်းက ဒါကို Performancing Tool ဆိုပြီး သိကြပါတယ်။ အခုတော့ ScribeFire လို့ နာမည်ပြောင်းလဲ ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီတူးလ်လေးဟာ Text Editor တစ်ခုလို ပြည့်ပြည့်၀၀ စွမ်းဆောင်မှုတွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပိုစ့်တွေထဲမှာ Tags ထည့်တာတွေ၊ စာကြောင်းစီတာတွေ၊ Paragraph Layout စတာတွေကို အလွယ်တကူ ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါလေးကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် မီးလျှံမြေခွေး ဘရောက်ဇာကို အသုံးပြု ရပါမယ်။ ပြီးတဲ့အခါ www.scribefire.com ကနေ နောက်ဆုံးထုတ်တဲ့ Addon လေးကို Install လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ အဲဒီအဆင့် ပြီးတဲ့အခါ မိမိရဲ့ မီးလျှံမြေခွေး ဘရောက်ဇာကို ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ညာဘက် အောက်နားမှာ စာရွက်ပုံလေးတစ်ခု ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့ဂ် အကောင့်ကို မေးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါ ဘလော့ဂ်မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ ကိုယ့်နာမည်နဲ့ စကားဝှက်ကို အသုံးပြုပြီး ဖွင့်ပေးရပါမယ်။ ပုဂံနတ်ကြီး ဆာဗာအောက်က လူတွေကတော့ ဖိုင်းယားဖောက်စ်က ဒါကို ပိတ်ထားတာမို့ ဥာဏ်နီ ဥာဏ်နက်လေးတွေ သုံးရပါလိမ့်မယ်။ (အဲဒီအဆင့်ကို ကျော်လိုက်ပြီ)။ အဲဒါတွေ အားလုံးပြီးရင် ကိုယ့်ဘလော့ဂ်နာမည်လေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ စာကို အဲဒီအပေါ်မှာ တခါတည်း ရိုက်ပြီး ပိုစ့်တွေ တင်နိုင်ပါပြီ။ တက်ခ် တွေလည်း ထည့်နိုင်ပါတယ်။ Save လုပ်ထားမယ်ဆိုလည်း ရပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
Posted by MYAT KA LAY at 1:31 AM2comments:
My name is Myat Thin Hton @ my friends always call me "Hton" @ "Hton Hton". I want to beagood "Blogger". I like music so much.
ဇော်ဂျီ font ရယူပါ
Update Zawgyi Font
Older Posts2Mar -9Mar (1) 17 Feb - 24 Feb (1) 10 Feb - 17 Feb (1) 25 Nov -2Dec (1)